Mialà ivelan'ny Internet, miangalà tsy ho tafiditra intsony, farafaharatsiny mandritra ny fotoana kelikely | Martech Zone
Mialà ivelan'ny Internet, miangalà tsy hidy amin'ny toerany, farafaharatsiny mandritra ny fotoana fohy
Alakamisy, Aprily 15, 2010 Talata, Aprily 1, 2014 Steve Kremer
Tsy sary stock ity. Izany no tongotro eo amin'ny fihinanam-bilona eny amoron-dranomasina any Honduras. Tsy misy sela, tsy misy laptop, tsy misy olana mon.
Niditra an-tserasera voalohany aho ary nahazo ny adiresy mailaka voalohany tamin'ny fiandohan'ny 1995. Tamin'ny faramparan'ny taona 95 dia natomboka ny Orinasa famoronana tranonkala. Ny fananana orinasako manokana dia midika ho amin'ny Internet sy ho an'ny mpanjifako amin'ny fotoana rehetra. Niditra an-tsokosoko foana aho. Na dia tamin'ny fialantsasatra aza dia nentiko izao solosaina finday NEC taloha. Rehefa nandeha ny fotoana dia niditra an-tsokosoko fanombohana isan-karazany aho. Na dia teo am-pialan-tsasatra aza dia antenaina fa handany farafaharatsiny ny sasany amin'ny fotoanako hanamarinana mailaka "maika" ary hiantso fivoriana lehibe. Ary vitako izany.
Saingy tamin'ity herinandro lasa ity dia nandeha sambo karaiba aho ary nanao zavatra izay tsy nataoko tao anatin'ny 15 taona. Niala tanteraka aho. Tsy misy mailaka. Tsy misy finday. Mandritra ny 7 andro sy 10 ora katroka. Hafahafa tamin'ny voalohany. Saingy tamin'ny ankapobeny dia tsara izany, nahafaka. Eo amin'ny lafiny matihanina dia nanana fanampiana avy amin'ny mpiara-miasa amiko aho izay niresaka momba ny raharaha maika nitranga. Eo amin'ny lafiny manokana dia matetika no hitako fa nanatratra ilay iPhone tsy tao am-paosiko aho mba hahazoako fampahalalana amin'ny Internet teo no ho noeritreretiko fa nilaiko. Tsy teo ny teknolojia mpampitohy ahy ary rehefa afaka kelikely dia zatra izany aho. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia niresaka tamina fifandraisana an-orinasa aho ary nanonona ny fialan-tsasatra tsy tiako. Nilaza izy fa indraindray dia manana "detox" amin'ny faran'ny herinandro izay tsy manamarina ny "crackberry" mihitsy mihitsy. Nilaza izy fa tsara izany ary manaiky aho. Andramo izany..tetezo..detox.. Ankafizo ny lohataona.
Steve dia mamaritra ny tenany ho "firenena kely, rock-n-roll" kely sady teknisiana no mpivarotra. Niala tamin'ny WISH-TV izy tamin'ny 1995 mba ho iray amin'ireo mpamorona tranonkala sy mpanolo-tsaina an'i Indy voalohany. Nandritra ny fotoana niasany tamin'ny fanombohana, anisan'izany ny iProperty.com, Narrowline, OneCall Internet, Vontoo ary ChaCha taiza ny mpiasa # 4 ary talen'ny adiresy an-tserasera an'i ChaCha amin'izao fotoana izao.
Hadinoy ny famokarana Blackberry, Mandresy amin'ny Multi-Tasking
Rehefa manamboatra tranokala vaovao: refesina in-droa, manapaka indray mandeha
Apr 15, 2010 ao amin'ny 8: PM PM
Miarahaba anao amin'ny fialantsasatra. Mihevitra aho indraindray fa milevina lalina ao anatin'ny olana iasantsika izy ka tsy mihemotra mankany aoriana. Indraindray ny fahitana avy lavitra dia mahatonga ny zavatra hita mazava kokoa! Sary mahafinaritra!
Apr 17, 2010 amin'ny 10: 07 AM
Tiako be ny namaky ity lahatsoratra ity. Tena tsapako fa nahafinaritra anao ny fialan-tsasatrao. Manalavitra ny solosaina, lavitra ny olana rehetra. Maniry aho raha afaka manao vakansy atsy ho atsy. Amin'izao fotoana izao dia mbola mila mamita asa hafa aho.
Sary mahafinaritra tokoa!